यस्तो छ है तपाईको नयाँ सालको राशीफल ! | EuropeNepal.Net
यस्तो छ है तपाईको नयाँ सालको राशीफल !
Europe Nepal Sunday, April 13, 2014
राशीफलमा कतिपयले विश्वास गर्दैनन् । कतिपयले चाँहि अति नै विश्वास गर्छन् । यसमा विश्वास गर्ने, नगर्ने जिम्मा तपाईकै हो । तर, ०७१ सालभरिको त...
राशीफलमा कतिपयले विश्वास गर्दैनन् । कतिपयले चाँहि अति नै विश्वास गर्छन् । यसमा विश्वास गर्ने, नगर्ने जिम्मा तपाईकै हो । तर, ०७१ सालभरिको तपाईको राशीफल भने यस्तो छ -
Some do not believe the earliest. Some stayed very believe. It believed, who is in charge numerically. However, throughout the 071 years that this is your horoscope -
मेष- वर्षको पूर्वाद्धमा राम्रो छ । कार्तिक २५ देखि शनिको अढैया दशा सुरु हुन्छ । जग्गा-जमीन, व्यापार-व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिँदैन । समग्रमा मेष राशीलाई यो वर्ष मध्यम फल प्राप्त हुनेछ ।
वृष- गृहस्थितिमा सुख प्राप्ति हुनेछ । नोकरीमा सन्तोषजनक स्थिति छ । राजनीतिमा खिचातानीले निराश हुनुपर्नेछ । सन्तानपक्षबाट अपेक्षित सुख हुनेछैन । वैदेशिक रोजगारीमा खिन्न हुनुपर्नेछ ।
मिथुन- यो राशीलाई पनि यो वर्ष मध्यम स्थिति रहनेछ । आमाबाबुको सदभावमा गिरावट आउने छ । परीक्षामा पनि सफलता पाउने सम्भावना कम छ । खर्च बढ्नेछ । नोकरीमा ख्याती कमाउने सम्भावना छ ।
कर्कट- यो राशीका लागि ०७१ सालको पूर्वार्द्धभन्दा उत्तरार्ध राम्रो छ । पठन-पाठनमा राम्रो छ । पापकर्मतिर मन जान सक्छ । शारीरिक कमजोरीले आँटेको काम पुरुा नहुने र मनमा अशान्ति बढ्ने देखिन्छ ।
सिंह- यो राशीलाई उत्तरार्धभन्दा वर्षको पहिलो ६ महिना बढी फलदायी देखिन्छ । कात्तिक २५ देखि शनि अढैया दशा लाग्ने छ । दाजुभाइ, आमाबुबा र साथीभाइको सहयोग पाइने छ । मौसमी रोगव्याधले सताउनेछ । नोकरीमा सामान्य सफलता पाइने छ ।
कन्या- यो राशीलाई पहिलो ६ महिनाभन्दा पछि राम्रो छ । बोल्दा होस पुर्‍याउनुपर्ला । राजनीतिमा सम्मानित हुने अवसर आउला । पति-पत्नीवीचको सम्बन्धले उग्ररुप लिन सक्ने छ । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति छैन ।
तुला- यो राशीलाई कात्तिकसम्म मध्य साढेसाती दशा लाग्ने छ भने त्यसपछि अन्त्य साढेसाती दशा लाग्ने छ । त्यसैले यो वार्ष् खासै उत्साहवर्द्धक वर्ष छैन । यद्यपि राजनीतिले उल्लेख्य स्थानमा पुर्‍याउला । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउन सक्छ ।
वृश्चिक- यो राशीलाई पनि ०७१ सालको छ महिना कटेपछि आद्य साढेसाती र त्यसपछि मध्य साढेसाती शनि दशा छ । त्यसैले यो वर्ष खासै फलदायी छैन । यद्यपि आमाबुबा वा नातेदारको आशिर्वादमा रमाउन पाइन्छ । पढाइ लेखाइमा अरुची एवं दाम्पत्य जीवनमा कटुता आउने देखिन्छ । गर्दै आइरहेको बाममा खासै चित्त नबुझ्न सक्छ ।
धनु- यो राशीलाई कात्तिकदेखि साढेसाती दशा लाग्ने छ । आँटेको काममा अड्चनहरु आउने छन् । इष्टमित्रहरु टाढिन खोज्नेछन् । सन्तान पक्षबाट सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । पति-पत्नीवीचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ ।
मकर- यो राशीका लागि ०७१ साल घाम-छाँयाँजस्तै सुभ-अशुभ दुबै रहने देखिन्छ । नोकरी र राजनीति फलदायी देखिन्छ । दाजुभाइ दिदी बहिनीको सम्बन्धले आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । शत्रुहरु सल्बलाउनेछन् । भाग्य खस्किँदै गएको अनुभूति हुनेछ ।
कुम्भ- यो राशीका लागि पनि ०७१ साल शुभ-अशुभ दुबै खालको छ । बोली प्रधावकारी बन्ने छैन । राजनीतिमा खासै उपलब्धी छैन । पढाइ लेखाइ र व्यापार व्यवसाय राम्रै छ । शत्रुहरु निराश हुनेछन् ।
मीन-यो राशीफल भएका मानिसलाई कात्तिकसम्म शनिको अढैया दशा भए पनि त्यसपछिका महिनामा भने राम्रो हुने देखिन्छ । बौद्धिक स्थिति पनि अब्बल दर्जाको रहनेछ । बोलीको प्रभावले काम बन्ने छन् । भाग्य अलि कमजोर रहेकाले मनमा चिताएका काम पूरा नहुन सक्छन् । दाम्पत्य जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन ।
स्रोत- तोयानाथ पञ्चाङ्ग
EuropeNepal.Net: यस्तो छ है तपाईको नयाँ सालको राशीफल !